Ndị na -emepụta petmeds, ndị na -ebubata ya - China petmeds factory
ịgba ọgwụ nduru
Ụlọ ọrụ anyị hiwere na 2005 wee gafere GMP (ngwaahịa ngwaahịa 14), ntụtụ, ọnụ, ọgwụ nje, ntụ ntụ na mgbakwunye nri. A na-ere ngwaahịa anyị na Sudan, Ethiopia, Arabia, Egypt, Pakistan, Afghanistan, South Africa, etiti ọwụwa anyanwụ na ndị ọzọ. Invermectin injection injection oxytetracycline injection na ọgwụ nduru, ọgwụ ahịhịa bụ ngwaahịa anyị bụ isi. ngwaahịa anyị na -asọ mpi.
Oxyclozanide 10mg +Levamisole20mg mbadamba
TABLET OXYCLOZANIDE LEVAMISOLE Gastrointestinal nematodes ikpuru ikpuru mejupụtara: Mbadamba ụrọ ọ bụla nwere: Oxyclozanide. ……… 20… Ọgwụ: A na -agbakọ ya dị ka levamisole, ka ewere ya ọnụ. Nduru: 1 mbadamba r ...
isii n'otu maka nduru
isii n'ime otu maka kpalakwukwu Capsule nke ọ bụla nwere Sulfachloropyrazine sodium 30mg Ofloxacin hydrochloride 5mg Tinidazole 15mg Ngosipụta: ọrịa nje, ọrịa nje, ọrịa chlamydia, ọrịa coccidium, ọrịa trichomonad, ọrịa afọ na eriri afọ, ọrịa agwakọtara, ihe mgbaàmà iku ume (wulite phlegm, dyspnea expiratory dyspnea). ), ihe mgbaàmà eriri afọ (ọgbụgbọ, afọ ọsịsa, ọrịa ihe ubi- iri nri na-adịghị eri nri), ornithosis na mgbaàmà jikọtara ọnụ. Ojiji na onunu ogwu: Maka mgbochi ...
gbuo nje maka nduru
Ngosipụta: Ọ na -egbu nje n'ụzọ dị irè na akwu nduru, akwu nnụnụ na ahụ nnụnụ Ngwaahịa maka ndị mmadụ, nduru, nnụnụ adịghị mma, enweghị mmerụ ahụ. Mgbaàmà mmegharị ahụ: nduru a na -ata ahụhụ, parrots na ụdị anụ ufe peony dị ka: mites, mpe scabies, anwụrụ nku, nku nku, ọchịcha, ndanda nwere mmetụta.
abụọ n'ime otu maka nduru na -efe efe
abụọ n'ime otu Ngosipụta: A na -ejikarị ya maka ọrịa salmonella, ọrịa adenovirus, ọnyụnyụ azụ bacillary, nje na -efe efe, afọ ọsịsa na -emegharị ahụ, necrotizing enteritis na afọ ọsịsa afọ na -akọwaghị. 1.Adị mmiri mmiri ọ bụla, ọnyụnyụ ọbara, stool na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ịpị stool mmiri, stool physiological stool, stool imcus bacteria, wdg; 2, enweghị agụụ, mmụba na mmiri ọ drinkingụ ,ụ, nku na -ada ada, ábụ́bà rụrụ arụ, ịgba agbọ, ịtụfu, nri ihe ọkụkụ, mkpokọta mmiri, mkpokọta gas ...
Capsule na-ekpochapụ Trichomonas-Coccidian
Trichomonas-Coccidian-clearing Capsule Composition: Metronidazole, sulfaclozine, vitamin Indication: Na-ehicha ma na-egbochi ma nke trichomonas na coccidian ngwa ngwa, na-agwọ afọ ọsịsa na ịrụzi mucosal eriri afọ. Usoro itinye: Were otu capsule kwa ụbọchị Maka nduru okenye karịa ụbọchị 3-5 mgbe ọgwụgwọ. A na -anabata ọkara ọkara maka squeaker ma ọ bụ maka mgbochi. Mmetụta ọmetụta: ọnweghị nchekwa: debe ya na ebe kpọrọ nkụ. Ịdọ aka na ntị: zere ụmụaka ngwugwu: 120 capsules/bottle
Mkpokọta Capsule Anti-adenovirus: ọgwụ ọdịnala Chinese Ngosipụta: nkwadebe ngwakọta ọdịnala, nwere ike igbu ọtụtụ nje, gbuo nje na-efe efe na nje na-agbari nri, ma chebe mmebi imeju site na nje, nje. Usoro itinye: Were otu capsule otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'ụbọchị, karịa 3-5d maka ọgwụgwọ. Ọkara doseis bụ nke a nakweere maka mkpọtụ ma ọ bụ maka mgbochi. Na -arụkọ ọrụ na Digestive na gastric ntụ ntụ nwere mmetụta mmetụta. Mmetụta ọmetụta: ọnweghị nchekwa: debe ya na ebe kpọrọ nkụ. Ịdọ aka ná ntị: ...
Neomycin Sulfate10mg+Sulfanilamide10mg+Paracetamol20mg+multivitamin mejupụtara: Mbadamba ụrọ ọ bụla nwere: Neomycin Sulfate …………………………… .. ………. …… .10mg Sulfanilamide …………………………. ……………… ……… .10mg Paracetamol ……………………………………………………………………… .. 20mg Vitamin B1 …………………………………………… .. ………… ..4.5mg Vitamin B6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … ..2mcg IHE: Nchikota Sulfadimidine + Neomycin Sulfate, na -arụ ọrụ dị ka ọgwụ nje siri ike ma ejiri ya gbochie ma gwọọ ụdịdị dị iche iche nke ba ...
Norfloxacin - mbadamba 10 mg
Norfloxacin 10mg mbadamba ụkwara Nje nje maka nduru mejupụtara: mbadamba ọ bụla nwere: Norfloxacin. ………………………………………………… .. ..… a na -enyo enyo na ọ bụ nje bacteria kpatara ya. Ọgwụ: 10mg kwa kilogram ịdị arọ anụ ahụ. Nkịta/nwamba: 1 mbadamba kwa awa 12 maka ụbọchị 2-4. Nduru: Ụbọchị 1: mbadamba 2. Ụbọchị 2-4: 1 mbadamba. Ogologo oge ọgwụgwọ: ụbọchị 3-5. Oge nkwanye: 7 ụbọchị. Ejila na nnụnụ na -emepụta akwa maka mmadụ c ...
Ọkpụkpụ na -ewusi ike A haziri nke ọma maka iji nduru: Nkọwa kacha dị oke ọnụ maka ihe oriri avian calcium Ọ dị mkpa maka mgbe enwere ike ịtụ anya ụkọ calcium ma ọ bụ n'oge ọmụmụ. Na -edobe ọkwa calcium nke ọma.
Mbadamba ụrọ Florfenicol 10 mg+
FLORFENICOL TABLETS ọrịa iku ume maka nduru MGBE: Florfenicol 10mg+Multivamin INDICATION: bụ ọgwụ nje a na -ejikarị maka ọgwụgwọ ehi, ezì na azụ nwere ọrịa iku ume (CRD). Mgbe ụfọdụ a na -eji Florfenicol na nkịta na nwamba.
Doxycycline HCL 5mg+Spiramycin 10mg mbadamba
Doxycycline HCL 5mg+Spiramycin 10mg mbadamba Chlamydiosis na antiprotozoal na antihelminthic COMPOSITION: Doxycycline HCL 5mg+Spiramycin 10mg IHE: orinthosis, chlamydiosis, ọrịa parrot ma ọ bụ ahụ ọkụ. ọgwụgwọ antiprotozoal na antihelminthic. A na -edekarị ya maka ịgwọ ọrịa anụ ahụ dị nro. Ọgwụ: mbadamba abụọ maka ụbọchị mbụ. Otu mbadamba kwa ụbọchị malite n'ụbọchị nke abụọ. MGBE: Ejikwala grit, mineral na ngwaahịa calcium n'oge ọgwụgwọ ....